कसरी तपाइँको चिनी लालसा नियन्त्रण गर्न र Leptin प्रतिरोध रिभर्स - फिटनेस छूट
घर » ब्लग » तपाइँको चिनी लालसा र रिभ्ट लेप्टिन प्रतिरोध कसरी नियन्त्रण गर्ने
विश्वभरि असंख्य व्यक्तिहरू लेप्टिन प्रतिरोधी हुन्छन्, र धेरैलाई यो थाहा हुँदैन। सामान्य आधुनिक आहार योजना पर्याप्त कारक हो। धेरै चिनी, अन्न, र प्रशोधन गरिएको खाना खाँदा तपाईंको बोसो कोषहरू लेप्टिनको साथ तपाईंको शरीरमा बाढी आउँछ। यो सामान्यतया पर्याप्त गर्नुहोस्, र शरीर लेप्टिन प्रतिरोधी हुन द्वारा अनुकूलन।
यस प्रक्रियाले कार्य गर्दछ कसरी मान्छे इन्सुलिन प्रतिरोधी हुन्छन्। यसले तपाईंलाई रोगी, थकित, र भोक भोकै रहन दिन्छ - जब तपाईं आफ्नो शरीरको आवश्यकता भन्दा बढी खाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग खानाको तृष्णा भने सबै समय छ र तपाईं खाना खाने समय नभएसम्म अर्को खाजाको लागि निरन्तर खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ सम्भावना हुन्छ कि तपाईं लेप्टिन प्रतिरोधी हुनुहुन्छ।
नियन्त्रण बाहिर खाना लालसा (विशेष गरी अस्वस्थ खानाको लागि तिर्सना) लेप्टिन प्रतिरोधको लक्षणहरुमा प्रबल हुन्छ। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि तपाईले आफ्नो खाना बाहिर ठाउँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् ताकि उनीहरूको बिचमा कम्तिमा चार घण्टा सम्म रहोस्, र आफैंलाई केही पनि खाजा लिन नदिनुहोस्। यदि यो तपाइँको लागि गाह्रो छ, त्यहाँ एक ठूलो मौका तपाईं लेप्टिन प्रतिरोधी हुनुहुन्छ। निन्दन अभाव र पर्याप्त नखाएको लेप्टिन प्रतिरोधको लागि जिम्मेवार हुन सक्छ।
यदि तपाईं डाई and गर्दै हुनुहुन्छ र छिटो तौल घटाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको लेप्टिन प्रतिरोधलाई ठूलो तरिकामा बाँध्न सक्छ। यो नाटकीय रूपमा तपाईंको क्यालोरी सेवन काट्न अत्यन्तै लोभ्याउने छ जब तपाईं वजन घटाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, चरम क्यालोरी प्रतिबन्धको कुनै पनि समयमा ब्याकफायर हुन सक्छ, तपाईंको शरीर लेप्टिनको लागि अझै बढी प्रतिरोधात्मक रहँदै अन्तर् अनुकूलित गर्दछ। यो तथ्य यो छ कि अचानक क्यालोरिक परिमार्जन पछि, तपाइँको शरीर भण्डार गरिएको बोसो समात्न यसको शक्तिमा सबै गर्छ। यो गल्तिले धेरै मानिसहरूलाई हुन्छ जब तिनीहरूले अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय पेलियो डाइटमा परिवर्तन गर्न खोज्छन्।
उच्च तनावको संयोजन र पर्याप्त निन्द्राको मिश्रणले तपाईंको कोर्टिसोल र हर्मोन स्तर बढाउँदैन। अधिक कोर्टिसोलले अधिक तनाव र कम निन्द्रामा नतिजा ल्याउँछ, एक दुष्चक्रमा पुग्न जुन प्रत्येक पटक उही तरीकाले समाप्त हुन्छ: खराब स्वास्थ्य। यदि तपाइँ तपाइँको तनावलाई नियन्त्रण गर्न कार्य गर्दै हुनुहुन्न वा हरेक रात कम्तिमा to देखि hours घण्टा निन्द्रा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आफैले अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। उच्च कोर्टिसोल लेप्टिन प्रतिरोधको कारण हुन्छ, र जब अनियन्त्रित छोडिन्छ, मोटापा, सूजन, र हृदय रोगको बढेको खतरा निम्त्याउँछ।
यदि तपाइँ यद्यपि मात्र धेरै चिनी उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यो तपाइँको लेप्टिन प्रतिरोधको प्राथमिक पक्ष हुन सक्छ। चिनी तपाईको स्वास्थ्यको लागि धेरै विधिहरूमा हानिकारक हुन सक्छ। चिनीको बारेमा त्यहाँ केहि छ जसले हामीलाई अooks्गाल्छ र हामीलाई बारम्बार झेलिरहन्छ। चाहे हामी यसलाई मन पराउछौं वा चिनीले हाम्रो प्रमुख पकड राख्दछ। यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने सम्भवतः तपाईंले बुझ्नुहुनेछ, र यस आकर्षणको पहिलो-हात अनुभव छ। चिनी मिठाई मात्र होईन, यो बाध्यता हो; "केवल एक" मिठो उत्पादन पछि रोक्ने कुनै चीज छैन ..
हामी हाम्रो चिनी लालसा को धेरै कारणहरु संग प्रदान गरिएको छ: खुशी खोज्ने मस्तिष्क सर्किट, खनिज कमी, आंत्र परजीवीहरु, कुपोषण, असंतुलित आहार योजनाहरु, बानी ब्यबहार, धेरै नुन, दफ्न भावनात्मक समस्या, निन्द्रा को अभाव, तनाव र ... र हाम्रो रुचाइएको, अनुशासन को अभाव। चिनीमा हाम्रो लतका कारणहरूका लागि हामी घाटामा छैनौं, यद्यपि हामीलाई वा हाम्रो व्यवहार बदल्न पर्याप्त छैन। यदि पर्याप्त भएको थाहा पाएर हामी सबै हाम्रो जीवनको प्रत्येक स्थानमा स्वर्ण पदक र स्वर्ण तारा जित्ने छौं। यदि केहि पनि, थाहा पाउँदा मात्र यो झन नराम्रो महसुस हुन्छ ... हामी अझ राम्ररी जान्दछौं किन हामी अझ राम्रो गरिरहेको छैन? आफुलाई नराम्रो महसुस गर्नका लागि बुझ्नु भनेको अर्को कारक हुनु हो।
बुझ्ने अर्को कार्य भनेको यसको लागि समाधान खोज्नु हो। हामी मामिलाहरू आफ्नै हातमा लिन्छौं र हाम्रो चिनी-मायालु स्विच बन्द गर्नका लागि बन्द गर्न को लागी प्रयास गर्छौं। यो कुनै दर्द रहित प्रक्रिया होईन, र जब हामी महसुस गर्छौं कि हामीले मैदान बनाइरहेका छौं भने हामीलाई टस गर्न केही चीज आउँछ र हामी चिनीलाई भेट्टाउने अभियानमा छौं जुन हामी फेला पार्न सक्दछौं र सुरुमा फिर्ता पाउन सक्छौं।
जब हामी हाम्रो चिनी निर्भरता लक्षित गर्ने छनौट गर्छौं, हामी चिनीमा नै आक्रमण गर्छौं, हामी भान्साको घर खाली गर्छौं, सबै चीजहरूको घर खाली गर्छौं र चिनीलाई शत्रु भन्छौं। र यो ठीक छ ... बाहेक यसले काम गर्दैन। जब हामी यस प्रकारको कार्य योजनाको विकास गर्छौं, हामी कार्यको एक जोडी भन्दा टाढा छौं र गलत निर्देशनहरू व्यवहार गर्छौं। हामी वास्तवमै के हुँदैछ भनेर सम्बोधन गर्दैनौं।
गोप्य: सही मुद्दा लक्षित गर्नुहोस्, मुद्दाको साइड-इफेक्ट होईन। र चिनी लालसा साइड-इफेक्ट हो, ती वास्तविक समस्याको चिन्ह हुन्, र उपचारको संकेतले मुद्दालाई इच्छाशक्ति बनाउँदैन। सही, दीर्घ-स्थायी संशोधनको विकासको एक मात्र विधि भनेको यी खतरनाक चिनी क्र्याings्क्सहरूको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नु हो ... अन्यथा तपाईं केवल आफ्नो समयलाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को भावी चिनी द्वि घातुमानको लागि आफैलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ।
मूल कारण के हो? यो लेप्टिन प्रतिरोध हो जुन हामीले पहिले कुरा गर्यौं। तपाईको चिनी लालसा र रिभर्स लेप्टिन प्रतिरोध लाई नियन्त्रण गर्ने एक तरीका एक प्राकृतिक पूरक लेप्टिटोक्स हो, जुन २२ सबै प्राकृतिक सक्रिय अवयवहरुको मिश्रण हो जुन तपाईको शरीरलाई लेप्टिन प्रतिरोध उल्टाउन काम गर्दछ र यसको प्रभावहरु। जब हाम्रो शरीरमा लेप्टिन प्रतिरोध देखा पर्दछ हामीसँग एक खराबी प्रणाली छ। यो विघटन समस्याग्रस्त लक्षण पैदा गर्दछ। लेपटिन प्रतिरोधले भोक बढाउँदैन मात्र यसले तृष्णा उत्पन्न गर्दछ! यो विनाशको लागि एक नुस्खा हो! केवल तपाईं भोकाउनुहुने छैन तर तपाईं सम्भव भएको सबैभन्दा खराब खालका खानाहरू चाहानुहुन्छ…
हामीले अर्को कुकीको लागि पुग्न रोक्न असमर्थताको लागि सूर्य अन्तर्गत सबै कुरा दोष दियौं।… लेप्टिन प्रतिरोध तर सबै। यदि तपाईं वास्तविक गति र परिवर्तन हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले लेप्टिन प्रतिरोधलाई लक्षित गर्न आवश्यक छ र यसलाई "फिक्स" गर्न केही गर्नुहोस्।
लेप्टिटोक्स भनेको लेप्टिन प्रतिरोधको बढ्दो समस्यामा भाग लिने एक मात्र तरिका हो, यसलाई ध्यानमा राखी यसलाई लक्षित र सम्बोधन गर्नका लागि उत्पादन गरिएको हो। लेप्टिटोक्स 22 राम्ररी छनौट गरिएको जडिबुटी, अमीनो एसिड र भिटामिनको मिश्रण हो जुन तपाईंको शरीरलाई लेप्टिन प्रतिरोधको वास्तविक कारणलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ। यो वजन परिवर्तन को बारे मा तपाईंलाई थाहा थियो सोचे पनी परिवर्तन हुनेछ।
Leptitox मा २२ घटकले things चीज गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्: शरीरलाई डिटॉक्स गर्न, लालसालाई नियन्त्रण गर्न र स्वस्थ तौल घटाउन प्रोत्साहित गर्न। दैनिक खुराक दिनमा २ चोटि लिईन्छ, र खानुभन्दा पहिले २०--22० मिनेटमा ती २ क्याप्सुल लिन सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाइँ पूरकहरू लिनको लागि एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई तपाइँको फोनमा अलार्म सेट गर्न सल्लाह दिन्छौं तपाइँलाई खाना खानु भन्दा पहिले उनीहरूलाई लिन सल्लाह दिनुहोस्।
यदि तपाईं यस उत्पादनलाई बाहिर जाँच गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ भने, लेप्टिटक्सले पूर्ण day० दिनको पैसा फिर्ता प्रयोग गर्दछ त्यसैले तपाईंसँग पूरानो केही पनि हुँदैन यदि यो पूरक तपाईंको लागि काम गर्दैन भने। Leptitox अर्डर गर्नुहोस् आज र आफ्नै लागि यो प्रयास गर्नुहोस्।
अक्टोबर 27, 2019 व्यवस्थापक ब्लग, पूरक कुनै टिप्पणी छैन